Single Shot & 2K မှိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ထောက်ပံ့သူများ - China Single Shot & 2K မှိုစက်ရုံ
ဆေးထိုးခြင်းမှိုသည်ပုံသွင်းစဉ်အတွင်းပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုပုံသဏ္andာန်နှင့်အရွယ်အစားကိုပေးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ပုံသဏ္structureာန်ဖွဲ့စည်းပုံပလပ်စတစ်အမျိုးအစား၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဆေးထိုးစက်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
မှိုဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲနဲ့နီးကပ်စွာဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲ၏အောင်မြင်မှုသို့မဟုတ်ကျရှုံးမှုသည်မှိုဒီဇိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မှိုထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ ပလတ်စတစ်မှိုဒီဇိုင်းသည်ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းအပေါ်မူတည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့စဉ်ဘဝတွင်အသုံးပြုသောကိရိယာများနှင့်ထုတ်ကုန်များ၊ စက်ကိရိယာ၏အခြေခံမှသည်၊ စက်၏အပြင်ဘက်အဖုံးမှပုံသွင်းခြင်းနှင့်နီးကပ်သောဆက်နွယ်မှုရှိသည့်အမျိုးမျိုးသောအိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုး၏ဝက်အူ၊ ခလုတ်နှင့်အမှုအထိအထိရှိသည်။
2K ဆေးထိုးခြင်းပုံသဏ္:ာန် - ထုတ်ကုန်ဆေးထိုးခြင်းမှိုမတူညီသောပလတ်စတစ်ပစ္စည်း ၂ မျိုးနှင့်အရောင် ၂ မျိုးဖြင့်ထိရောက်ပြီးချွေတာသည်
2K Injection မှို၊ တစ်ခါတစ်ရံ ၂ ခု၊ ၂ ပုံရိုက်ခြင်း (သို့) အရောင် ၂ ရောင်ဟုလူသိများသည်ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများမှရှုပ်ထွေးသောပုံသွင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုသောဆန်းသစ်သောထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ် .....
2K Injection တစ်ခုစက်ဝိုင်းတစ်ခုတွင်နှစ်ခုထိုးဆေးထိုးရန်စီစဉ်ထားကြောင်းစက်တစ်ခုပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေ။
Injection မှိုသွန်းသောပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုသတ္တုမှိုသို့မြင့်မားသောဖိအားများဖြင့်ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့်ထုံးစံအတိုင်းပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ အခြားသောပလပ်စတစ်ပုံသဏ္likeာန်ကဲ့သို့အရည်ပျော်သောပလပ်စတစ်ကိုမှိုထဲသို့သွင်းပြီးနောက်ပုံသဏ္plasticာန်သည်အအေးခံ။ အစိုင်အခဲပလပ်စတစ်အပိုင်းကိုဖော်ပြရန်ဖွင့်သည်။
အောက်ပါအဓိကဒြပ်စင် (၅) ခုသည်နှစ်ခါပုံသွင်းခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
၁။ မှိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှိုဒီဇိုင်းမပြုလုပ်မီ၊ မှိုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်အရောင်နှစ်မျိုးမှိုဒီဇိုင်းအတွက်မလိုအပ်သောရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားရန်ပုံသဏ္includingာန်၊ အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္includingာန်များအပါအဝင်ဖြစ်သည်။
၂။ မှိုဖွဲ့စည်းပုံကောင်းမွန်သောမှိုဒီဇိုင်းသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရုံသာမကကုန်ကျစရိတ်များကိုလည်းသက်သာစေသည်၊ ပြုပြင်ခြင်းအခက်အခဲကိုလျှော့ချပေးသည်၊ ဤအရာကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုအပြည့်အဝကြေငြာရုံသာမကဆေးထိုးစက်၊ မှိုဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာနှင့်မှိုစက်ရုံကိုယ်တိုင်၏ပြုပြင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုအပြည့်အဝနားလည်ရမည်။
၃။ ပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်းနှစ်ပုံသွင်းခြင်းအတွက်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည် ၀ တ်ဆင်မှု၊ ခိုင်မာမှု၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည်၊ အအေးနှင့်အပူပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဒဏ်၊
4. အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဒီဇိုင်းနှင့်ပစ္စည်းရွေးချယ်ခြင်းအပြင်၊ နှစ်ဆပုံသွင်းခြင်း၏တိကျမှုသည်နောက်ဆက်တွဲပြုပြင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်မှို၏တိကျမှန်ကန်သောပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုကိုသေချာစေရန်မြင့်မားသောတိကျသောအဆင့်မြင့်သောစက်ကိရိယာများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောပညာရှင်များလိုအပ်သည်။
5. မှိုစမ်းသပ်ခြင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်းအချိန်နှင့်ပြwasနာများကိုမဖြုန်းတီးရန်အလို့ငှာအကောင်းဆုံးအပူချိန်နှင့်ဖိအားပေးမှုအခြေအနေများမှိုမှိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်တွင်အမျိုးမျိုးသောအပြောင်းအလဲအခြေအနေများကိုချိန်ညှိထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၌, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစစ်ဆင်ရေးခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာရန်နှင့်ထုတ်ကုန်များအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးဝင်သောနည်းပညာ parameters များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။
ရှေ့ပြေးပုံစံမှို Makers, စိတ်ကြိုက်မှို, မှိုစက်ရုံ, မှိုထုတ်လုပ်သူ, သတ္တုထည့်သွင်းနှင့်အတူဆေးထိုးမှို, ပလပ်စတစ်ထည့်သွင်းမှို,